विदेशवाट फर्किएका युवाहरुको कथा ( भिडियो सहित ) | PBM News.com
विदेशवाट फर्किएका युवाहरुको कथा ( भिडियो सहित )
सन्तकुमार चौधरी / पिविएम न्यूज –
चितवन ६ साउन । विदेशवाट फर्किएका यहाँका युवाहरु पशुपालन तर्फ आर्कषित भएका छन् । लामो समय विदेश बसेर फर्किएका युवाहरु स्वदेशमै खुशी छन् । पशुपालन गरेरै विदेशमा भन्दा राम्रो पैसा कमाउन सफल भएका छन् ।
कालिका नगरपालिकाको वडा नं. १ सुर्यपुरका देविलाल श्रेष्ठले हिजोआज दैनिक ३५ लिटर दुध विक्री गर्दै आएका छन् । यिनको दैनिकी गाई गोठमै वित्ने गरेको छ । आठवर्ष विदेश बसेर फर्किएका देविलाललाई विदेश भन्दा अहिलेको पेशाले सन्तुष्टि मिलेको छ । घर परिवार सँगै बसेर पनि पैसा कमाउने मेसो पाएकोमा देविलाल मख्ख छन् । २ वर्ष मलेसिया र ६ वर्ष कतारमा सिक्योरिटी गार्डमा काम गरेका देविलालको गोठमा ८ वटा माउ र ३ वटा बाच्छीहरु छन् । ति मध्ये ६ वटा गाईबच्च पाउनेवाला छन् । देविलालका अनुसार अबको ३ महिनापछि दैनिक सदरदर ८० लिटर दुध विक्री गर्न सकिन्छ । २०७४ सालदेखि व्यवसायिक रुपमा गाई पाल्न थालेका हुन ।
सँगै बसेर काम गर्दाको मज्जा बेग्लै रहेको देविवालले सुनाए । यिनले निकट केहि दिनमै १० वटा माउ थप्ने योजना बनाएका छन् । दुधसँगै बाच्छी उत्पादन गरेर विक्री गर्ने यिनको योजना छ । १ लाख ५० हजार रुपैयाँबाट यिनले गाई पाल्न सुरु गरेका थिए । यिनको परिश्रम र पशुपालन प्रतिको लगाव देखेर कालिका नगरपालिकाको कार्यालयले गोठ सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत १ लाख रुपैयाँ अनुदान समेत दिएको छ ।
पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने किसानका लागि सरकारले सस्तो व्याजमा ऋण दिने खबर देविलाले पटक पटक सुने । सस्तो व्याजमा ऋण लिएर गोठलाई व्यवस्थित बनाउने योजना पनि बनाए । तर समाचारमा सुने जस्तो सहयोग भने पाउन नसक्दा थोरै मन खिन्न भएको सुनाए । अहिले आफ्नै प्रयासमा सनराईज बैंकबाट केहि धितो राखेर ऋण निकाल्ने तयारीमा छन् । यो पेशामा राम्रो मुनाफा हुने यिनले देखेका छन् । अर्काको देशमा परिवार छाडेर दुख गर्नुभन्दा परिवार सँगै बसेर गाईको गोबर सोर्न बेस लाग्ने गरेको छ ।
हिजोआज देविलालको दिन राम्रैसँग वितिरहेको छ । आफु सहित चारजनाको परिवार गाईपालनमै रमाएका छन् । देविलाल जस्तै कालिका नगरपालिकाको वडा नं. १ लंकालाईनका हिमाल स्याङताङपनि पशुपालनमै व्यस्त छन् । यिनले भने व्यवसायिक रुपमै भैसी पालेका छन् । ६ वर्ष साउदी अरब र इराक बसेर फर्किएका स्याङताङलाई हिजोआज भैसी स्याहार गर्न भ्याई नभ्याई छ ।
यिनको गोठमा ९ वटा दुनौ भैसी सहित २१ वटा भैसी छन् । गोठ थप्ने क्रम जारी नै छ । साउदीमा ६ वर्ष श्रम गरेर फर्किएका हिमालले विदेशमा खासै उपलब्धी देखेनन् । नेपालमै केहि गरौं भन्ने योजना बनाएर फर्किए । २ वटा भैसीबाट हिमालले भैसीपालन सुरु गरेका थिए । अहिले २१ वटा पुगेको छ । घरका सबै सदस्य यसैमा व्यस्त छन् । दैनिक ६५ लिटर दुध विक्री गर्दै आएका छन् । भैसी पालेर सबै खर्च कटाएर न्यूनतम मासिक ६० हजार देखि ७० हजार रुपैयाँ सम्म कमाउने गरेका छन् । अघिल्लो असार महिनामा सबै खर्च कटाएर ६० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएको हिमालले सुनाए । भैसी पालनमा रमाउँदै आएका हिमाललाई ६ वर्ष साउदीमा विताएको पल सम्झिदा नमिठो लाग्ने गर्दछ । उर्जावान समय यहि क्षेत्रमा लगाउन सकेको भए आर्थिक सम्पन्नताले मात्रै नभई यो पेशमा स्थापित भइसक्ने भन्दै पुराना दिन प्रति पछुतो मान्ने गरेका छन् ।
लिला वहादुर गुरुङ -अध्यक्ष वडा नं. १ कालिका नगरपालिका
विदेश जाने योजना रहेका साथीहरु कोहि भेटभयो भने हिजोआज यिनले विदेश जानुको साटो स्वदेशमै परिश्रम गर्न सुझाव दिने गरेका छन् । सबैले भैसीनै पाल्नुपर्छ भन्ने छैन –“उनले भने कोहि बाख्रापालन, कोहि बंगुरपालान, कोहि माछापालन, कुखुरापालन लगायत कृषि क्षेत्रमा प्रशस्तै सम्भावना छन् ।”
हिमालका अनुसार स्वदेशमै सम्भावना खोज्ने युवाहरुका लागि सरकारले कुनै न कुनैखालका ठोस प्याकेज बनाउन आवश्यक रहेको सुनाए । पशुपालनमा लागेका युवाहरुले जति गरेका छन आफ्नै विवेकले भ्याए सम्म गरेका छन् उनले भने –“तालिमको व्यवस्था मिलाउन सके अझै पोख्त भएर लाग्न सकिने थियो । ”
यसरी वडाभित्र व्यवसायिक रुपमा पशुपालनमा लागेका युवाहरुलाई लक्षित गरेर वडाले नयाँ योजना ल्याउने तयारी गरेको छ । कालिका नगरपालिकाको वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष लिला वहादुर गुरुङले विदेशको भूमि त्यागेर आफ्नै भूमिमा सम्भावना देख्न थालेका युवाहरुका लागि उनीहरुले चित्त बुझाउने गरी नयाँ खालको प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । यस्ताखालका किसानहरुलाई गोठ सुधार देखि घाँसका विउँ समेत खरिद गर्नका लागि स्थानीयतहले आर्थिक अनुदान दिँदै आएको बताउनुभयो । किसानहरुसँग थप परार्मश गरी नयाँ खालको प्याकेज ल्याउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको अध्यक्ष गुरुले बताउनुभयो । कालिका नगरपालिका भित्र मात्रै विदेशवाट फर्किएर पशुपालनमा रमाउने सय भन्दाबढी युवाहरु छन् । यि मध्ये केहि पशुपालनमा स्थापित भइसकेका छन भने केहि स्थापित हुने क्रममा छन् ।
खुमनारायण श्रेष्ठ – नगर प्रमुख
यो क्षेत्रमा लाग्ने युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न नगरपालिकाले आर्थिक अनुदान दिँदै आएको छ । नगरपालिकाका अनुसार ७ वटा भन्दाबढी गाई पाल्ने किसानका लागि गोठ सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत १ लाख रुपैयाँ दिँदै आएको छ । यस्तै बार्षिक १० हजार लिटर दुध बेच्ने किसानहरुका लागि २५ हजार रुपैयाँ दिँदै आएको छ । यसैगरी बाख्रापालन गर्ने किसानहरुका लागि गोठ सुधारका लागि २० हजार रुपैयाँ दिने गरिएको छ । नगर प्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठका अनुसार ब्यार्ड बोका खरिद देखि राँगा खरिदका लागि समेत नगरपालिकाले आर्थिक अनुदान दिने गरेको छ । सुत्केरी गाईका लागि म्याट दिने समेत व्यवस्था छ । अहिले सम्म १६ जनाले गोठ सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत जनहि १ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान पाएका छन् । यस्तै २० जनाले बाख्रापालनका लागि जनहि २० / २० हजार रुपैयाँ पाएका छन् । ७५ जनालाई काउ म्याट वितरण गरिएको छ । किसानहरुलाई आगामी दिनमा थप योजना ल्याउने बारे अध्ययन भइरहेको नगर प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । ((०))
रेष्टुरेन्ट बन्दभएपछि कुखुरा, ब्राखापाल्दै सौराहाका रेष्टुरेन्ट व्यवसायिहरु
विश्वभर कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५ लाख ७१ हजार ६८९
थारु संग्राहालय संरक्षणमा स्थानीयले देखायो चासो
रातको समयमा काठमाडौं उपत्यका प्रवेशमा रोक
अब पानी मात्र होईन, रगत पनि चल्छ वडा अध्यक्ष श्रेष्ठ